PC yako yachembera uye inononoka here? Enda Linux Lite | Linux Vakapindwa muropa
Pave nenguva kubva Microsoft yabvisa rutsigiro rwepamutemo rwe Windows XP, inoshanda sisitimu iyo yakakohwa kubudirira kukuru uye yakatsvaira huwandu hwevashandisi pa desktop. Kuregererwa kwerutsigiro urwu hakuna kufadza vashandisi vayo, avo parizvino vasingachabatsiri uye vangangoda kumanikidzwa kuwana Windows 7 kana 8, asi kwete zvese Hardware zvinotendera ...
Asi sekuziva kwako, ivo varipo yemazuva ano Linux distros izvo zvinogona kumhanyisa pane yekare hardware. Semuenzaniso, ndine makomputa maviri, rimwe rawo randinonyora chinyorwa ichi riine makore gumi nemapfumbamwe uye ndaive neWindows Vista pandakaiwana. Ini ndakabvisa Windows kare kare uye parizvino ine yazvino vhezheni yeUbuntu uye yakati rebei kupfuura Vista.
Asi kana yako Hardware yakatokura uye isingakwanise kana neUbuntu, openSuSE, Arch kana chero imwe yepamusoro Linux kugovera, tinokurudzira Linux Lite. Iko kugovera kwakanyatsogadzirirwa makomputa ekuita mashoma (senge mamwe akawanda aripo nekuda kwezvinangwa izvi uye zvatatotaura).
Linux Lite chete kudiwa 700Mhz processor, 512 MB ye RAM uye 5GB yemahara nzvimbo pane rakaomarara diski. Zvakaringana zvinodiwa kuti zvifambe zvakanaka kune ino Ubuntu 14.04 LTS-based distro iyo yakapihwa isina huremu XFCE desktop nharaunda. Iyo zvakare inosanganisa mapakeji esoftware akadai seFirefox, LibreOffice, VLC, GIMP, nezvimwe.
Uye kana iwe wakabva kuWindows XP kuenda kuLinux, desktop yacho yakafanana, saka hauzove nematambudziko akawandisa ekugadzirisa ... Hongu unofarira, unogona kurodha pasi kubva pane iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Linux Lite: dzorerazve komputa yako yekare
Linux Anoda akadaro
Isa zvishoma kushambadza pawebhu ndapota ... ndinonzwa kunge zvishoma
Pindura Linux Anoda
Chii chaunokurudzira kuPentium IV PC ine 256 Mb ye RAM?
Pindura kuna tezu
Iyo ine PAE rutsigiro here? Ndakaigadzirira iyo Penium M 1600 uye RAM 512 processor (Compaq HP nx 9030)
iri kwazvo windows xp isingatarisirwe lite oucpa 25 megs yegondohwe uye pentoum ii 233 mhz i mb yevhidhiyo
buiscalo inonzi xtreme plus uye chishongo;)
linux linte inononoka kana ichienzaniswa ne xp xtreme plus inokurumidza kwazvo haina kana kudya chero chinhu megumiyiti makumi maviri yegondohwe 20 vhidhiyo uye inogona kugadziriswazve yakawanda pasina kuverenga kuti inoenderana nezvose zviri mumawindo cn chrome akaisirwa anotora 0 megabytes egondohwe ne pentium 150 ht ndinoita zvirinani kupfuura yakawanda pc ine linux uye 4 gb yegondohwe ndinorikurudzira, ingozviedza
Pindura kune sdfgsdfg
Elver Galarga akadaro
wtf uye izvo zvinodiwa zvinonzi lite usasve, zvirinani shandisa marara eefenix windows inokumbira zvishoma uye inoshanda nekukurumidza
Pindura kune elver galarga